Archive du 20190805
Kitra CHAN 2020 Tafita ny BAREA…
Tafita any amin’ny dingana faha-3 amin’ny fifanintsanana baolina kitra CHAN 2019 na fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ho an’ny
Antenimieram-pirenena Banga ny toerana roa hatreto
Tsy mbola manana solombavambahoaka misolotena ny vahoakany ireo distrikan`i Fandriana sy Mahabo eo anivon`ny Antenimieram-pirenena.
Depiote Ramboasalama Emilien “Tsy ekenay ny fanoloana PDS ny ben’ny tanàna”
Nisy fihanaombe sy fiaraha-misakafo tetsy amin’ny Kianja Mitafon’i Mahamasina ny sabotsy lasa teo nentin’ny depiote Ramboasalama Emilien nisaorana ny vahoakan’ny Boriborintany faha-IV tamin’ny fametrahana fitokiasana taminy.
Rajoelina sy ny tetikasany Mbola mampahatsiahy ny tetezamita
Hodidinina mpanao politika ela nihetezana sy mpandraharaha mpanefoefo. Izay no azo ilazana ny toerana misy ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, ankehitriny.
Nosy bodoin’ny Frantsay sy ny Anglisy Mila mafy ny diplomasian’i Madagasikara, Maorisy, Komoro
Mila mametraka diplomasia mahery vaika kokoa i Madagasikara, Maorisy, Komoro, mahakasika ireo tany an’ireo firenena ireo bodoin’ny firenen-dehibe.
Mahajoro REKANY Mila jerena ireo antoko mpanohitra hafa
“Ekena fa i Marc Ravalomanana no mety ho lohan'ny mpanohitra ary tsy azo iadian-kevitra io. Saingy mitondra tena toy ny antoko MMM tarihan` i Hajo Andrianainarivelo tamin'ny taona 2016.”, hoy i Mahajoro REKANY,
Mpanohitra ny fitondrana Mbola manova paikady aloha
Ao ireo nisafidy ny hangina tanteraka ary tsy hay hoe miandry kendry tohana ve sa ahoana ?
Tsy voafehy ny firenena Mahazo vahana ny tsy fandriampahalemana
Mirongatra be ny tsy fandriampahalemana na any ambanivohitra na eny an-tanàn-dehibe.
Madagasikara Hiroso amin’ny Repoblika faha-5 ?
Ny lalàmpanorenana, mandritra ity Repoblika faha-IV ity lany tamin`ny volana novambra 2010, no tena mampifanolana indrindra raha tamin`ny tantaran`i Madagasikara.
Governoram-paritra Maika amin’ny fametrahana azy ny fanjakana
Hatsangana tsy ho ela ny governoram-paritra ary hotanterahina ny fanomezana fahaleovantena amin`ny vola sy fitaovana azy ireo, raha ny loharanom-baovao,
Lisi-pifidianana Efa miditra ao anatin’ny fanadiovana ny fokontany
Ny 23 aogositra izao no hanateran’ireo fokontany ny lisi-pifidianana izay nodiovin’izy ireo, hoy ny sefo fokontany Ankaditoho Marohoho, nanaovana ny fanadihadiana.
Rugby à XV « Qualification Top 20 2019 » Natomboka omaly alahady tetsy Mahamasina
Natomboka omaly alahady 04 aogositra 2019 ka haharitra 3 herinandro be izao, ka hifarana amin’ny 01 septambra 2019, ny fifanintsanana rugby à XV fiadian-toerana hahazoana miatrika ny Top 20 2019 karakarain’ny Malagasy Rugby.
Namaly bontana ny mpikamban’ny MAMA “Aoka tsy hokorontanina ny lamina mipetraka”
Nitondra fanazavana ny solontenan’ny mpitatitra, mpikambana anaty koperativa, tompona fiara samihafa mpikamban’ny trano fiantohana MAMA (Mutuelle d'Assurance Malagasy) ny sabotsy teo manoloana ny fanenjehana ataon-dRtoa Clémence Raharinirina sy ny namany, manenjika mafy ireo mpikamban’ny Filankevi-pitantanan’ny MAMA.
FLM Synodam-paritany faritra Atsinanana Nampidirina CNaPS ny katekista avy amina fileovana 4
Ampidiro CNaPS avokoa ny mpiasa Mpikarama amin’ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana. Baikon’ny fitondram-panjakana izany.
Fialantsasatra Hafana ny Star tour any Mahajanga
Hafana tanteraka indray ny fialantsasatra lehibe ao an-drenivohitr’i Boeny amin’ity taona 2019 ity. Hotontosaina any an-toerana indray mantsy ny Star tour izay hiarahan’ny orinasa sy ny kaominina ambonivohitr’i Mahajanga, hetsika laharana fahatelo amin’izao.
Olan’ny tsipy kanetibe Malagasy Miantso ny minisitera hanapa-kevitra ny FSMB
Taorian’ny nahazoan’ny mpitantana FSBM “Federation Sport Boules Malagasy” taratasy fahazoan-dalana avy amin’ny Mjs “Minisiteran’ny tanora sy fanatanjahantena” ka nahafahany nitondra mpilalao tsipy
Kick Boxing Fahombiazana ny « Combats de défi »
Tontosa an-tsakany sy an-davany omaly alahady 04 aogositra 2019, tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny hetsika Kick Boxing « Combats de défi » nokarakarain’i Me Alain Michel niaraka tamin’ny klioban’ny Super
Nankaiza ny tanteliko teto ?
Tsy hisy handany andro hamorona tantara eto ka hamadika ny fotsy ho mainty; fa rehefa mety dia ambara fa mety, rehefa tsy mety dia tsorina fa tsy mety.
Fihariana Mahaliana ny tanora ny asa eny an-tsambo
Asa noheverina ho sarotra sy mafy nefa tena mahaliana ny tanora eto amintsika ny asa eny ambony sambo.
Famadihana any Andramasina Ahiana hampirongatra ny halatra omby
Vanim-potoana mampahazo vahana ny famadihan-drazana izao volana aogositra izao.
Anosimasina –Itaosy Mirongatra ny vaky trano sy ny fanendahana
Mirongatra ny vaky trano sy ny asa fanendahana ao anatin’ny fokontany Anosimasina, kaominina Bemasoandro Itaosy. Nanomboka ny volana mey lasa teo no nitrangan’izany,
Fikambanana FILEFA Hanolotra trano ho an’olona sahirana roa isan-taona
Fikambanana vonona ny hiady amin’ny fahantrana hanampy ireo Malagasy tena sahirana ny FIkambanan’ny LEon’ny FAhantrana tarihin-dRazafindrakoto Jacky.
Fihazana soka-dranomasina Telo mianadahy voasambotra tao Mahajanga
Telo mianadahy no sarona manao asa fivelomana amin’ny famonoana sy fivarotana soka-dranomasina tao Mahajanga ny faran’ny herinandro teo.
Halatra sy fanaovana hosoka Polisy sy mpiasa roa nidoboka am-ponja
30 000 000 Ariary no tentim-bidin’ny famoahana entana hosoka nataon’ny polisy iray sy ny namany sivily roa ka nampidoboka am-ponja vonjimaika azy ireo eny Antanimora ny zoma 2 aogositra teo.
Vaky trano tany Ihosy Misy Ramatoa mbola mitaiza kely ireo jiolahy
Saron’ny polisy ny tambajotran’ny mpamaky trano 6 mianadahy ka ramatoa mbola mitaiza kely ny iray.
Halabotry teny Ampasampito Vehivavy iray naiditra am-ponja
Mpamaky trano dimy no tratra teny Ampasampito ka vehivavy ny iray tamin’ireo, 32 taona eo no voasambotry ny polisy miasa ao amin ‘ny CSP3 Antaninandro ny 30 jolay lasa teo teny amin’ny
Ambohidrabiby RN3 Naratra ilay mpitondra môtô nifanehitra tamina fiara
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin’ny lalam-pirenena fahatelo, ny alin’ny alakamisy 1 aogositra teo, tamin’ny 8 ora alina.
Kaominina Bemanonga –Morondava Nahazo tranompokonolona sy CEG avy tamin’ny mpino silamo
Nahazo fotodrafitrasa avy tamin’ny mpino silamo sy ny fikambanana tsy miankina mpanao asa soa, ny ao amin’ny kaominina Bemanonga, distrikan’i Morondava, faritra Menabe.
Fidiran’ny mpianatra Misy ny fifanarahan’ny sekoly sy ny ray aman-dreny
Mikasika ny fidiran’ny mpianatra sy ny vola aloan’ny ray aman-dreny, dia nilaza ny mpanabe iray, fa misy ny fifanarahana sy ny fifampiresahana eo amin’izy ireo.